Ahoana ny fampiasana signage nomerika amin'ny fivarotanao? - Easy Multi Display
No comments sur Ahoana ny fampiasana signage dizitaly ho an'ny fivarotam-panafody?Posted in Digital Signage Par Clemnamoaka Enga anie 6, 2021 Enga anie 18, 2021 Tagged zana-kazo, Digital Signage, fivarotam-panafody, levitra, levitra, efijery, signage, rindrambaiko, am-baravarankely
Takela-by eo amin'ny varavarankelin'ny fivarotanao
Fijery iray eo afovoan'ny fivarotanao.
Takelaka lamba eo ambanin'ny kaontera
Takelaka iray eo ambonin'ny kaontera
Ny teknolojia dia miha manandanja kokoa eo amin'ny fiainantsika ary ara-dalàna izany! Voalohany, mora vidy kokoa izy io ary azon'ny rehetra idirana. Faharoa, mitsitsy fotoana be dia be ny teknolojia, tsy misy taratasy intsony, tsy misy afisy dokam-barotra intsony, nomerika io!
Tsikelikely, voafitaky ny teknolojia vaovao ireo orinasa ary tsy dia miha-fahita firy ny mahita tobacconist, supermarket, mpivarotra fiara na fivarotam-panafody mampiasa efijery handefasana vaovao. Fa nahoana? Fanatsarana fotsiny ny zavatra niainan'ny mpanjifa.
Na izany aza, noho ny tsy fisian'ny aingam-panahy dia mety ho sarotra ny mitady fampiasana azy Hafanàm-po an signage ary na izany aza ny saika an'ity teknolojia ity dia saika tsy misy farany (raha mampiasa rindrambaiko mety ianao!). Amin'ity lahatsoratra ity dia manome hevitra vitsivitsy izahay hampidirana ny takelaka nomerika ao aminao fivarotam-panafody!
Te hisarika ny mason'ny mpanjifanao ho avy ianao? Inona no mety ho tsara kokoa noho ny fametrahana efijery eo am-baravarankely hisarika ny masony? Hijanona minitra vitsy eo anoloan'ny varavarankelin'ny fivarotanao izy ary hijery ny efijeryo. Fa inona no haseho an'ity efijery ity? Azonao atao ny mampiseho ny toetrandro mivantana any an-tanànanao mba hampahafantarana ireo manantena ny toetr'andro sy ny herinandro.
Asongadino ireo vokatrao amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fivarotam-panafody misy anao ankehitriny mba hanaitra ny fahalianan'ny mpanjifa. Rehefa tafiditra ao anatiny dia ho afaka hilaza aminao momba ny fampiroboroboana hitany teo am-baravarankely ny mpanjifa.
Azonao atao koa ny mampiseho ny fantsom-baovao amin'ny fahitalavitra hitazomana ny mpanjifanao hatrany amin'ny vaovao any amin'ny firenenao. Fisehoan-javatra mora foana, ohatra, ahafahanao mampiseho horonantsary YouTube na fantsom-pahitalavitra mivantana.
Ny mpanjifanao dia ao anaty fivarotam-panafody anao, tena sahirana ianao satria manana mpanjifa marobe ary noho izany, tsy afaka manampy ny mpanjifanao ianao. Maninona raha aseho amin'ny iray amin'ireo efijeryo eo afovoan'ny fivarotanao fanafody ny sasany momba ny vokatra amidy anao? Toy ny faritra vitamina na zavatra hafa?
Ankoatry ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifanao dia handany fotoana be ianao ary afaka hifantoka amin'ny asa hafa. Raha vantany vao nahita ny fampiroboroboana teo amin'ny efijery iray ny mpanjifa dia hanantona anao mivantana izy hividy azy.
Azonao atao koa ny mametraka efijery iray izay hampiseho ny fakantsarinao fanaraha-maso hanakanana ny halatra rehetra ao amin'ny fivarotanao. Ny fivarotana sasany nisafidy an'ity rafitra ity izay mandeha tsara.
Sakan'ny takelaka nomerika nomerika
Fantatray fa ny halatra dia mety ho tena olana amin'ireo mpivaro-panafody. Fantatsika ihany koa fa misy mpivarotra parmasista sasany te-hitandrina malina momba ny rafitra fanaraha-mason'izy ireo. Ka maninona raha aseho ny efijery eo ambanin'ny kaontera hamela anao hahita ny fakantsarinao fanaraha-maso rehetra mivantana sy miaraka? Io dia hahafahanao mijery mandrakariva ny zava-mitranga ao amin'ny fivarotam-panafody anao.
Hitanay ny ilan'ny efijery iray eo am-baravarankely, eo afovoan'ny farmasinao na eo ambanin'ny kaontera fa ahoana kosa ny efijery ambonin'ilay kaontera?
Vao tsy ela akory izay, izao tontolo izao dia nifanaraka tamin'ny krizy ara-pahasalamana atrehiny. Araka izany, mahita rafitra "tapakila" marobe hatrany isika eo am-baravaran'ny fivarotam-panafody na fivarotana hafa hisorohana ny fanangonana olona eny amin'ny kaontera. Manomboka izao dia mandray tapakila ianao rehefa miditra ao amin'ny magazay, avy eo mitady ny entanao ary rehefa nantsoina ianao dia manantona any amin'ny cashier mba handoa. Alao an-tsaina ange raha toa ka voatery nantsoin'ny mpivarotra fanafody ny mpanjifa vaovao? Mampihoron-koditra ho azy ireo izany, koa maninona raha asiana efijery eo ambonin'ny latabatra mba hampisehoana ny isan'ny tapakilan'ny mpanjifa?
Ity teknika ity dia be mpampiasa kokoa ary efa nanaporofo ny fahombiazany ka maninona no tsy raisinao?
Ireto misy hevitra vitsivitsy izay mety hanampy anao handamina ny rafitry ny takelaka nomerika ao amin'ny farmasinao, saingy azonao atao tsara ny manao araka izay itiavanao azy satria ny fahafaha-manao dia saika tsy manam-petra ary afaka mampifanaraka ny fampisehoanao amin'ny filanao ianao Satria ankoatry ny fampiharana azy ho an'ny mpanjifanao dia ilaina ho anao koa ny takelaka nomerika ary hanamora ny fiainanao!
Ny tombom-barotra CVS Fahasalamana dia mitombo efa ho 11% amin'ny fivarotana fivarotana zava-mahadomelina
Ny signage nomerika dia ny ho avin'ny antsinjarany
LCD Digital Signage Market: Fivarotana matanjaka eo alohan'izay | LG Electronics, Philips, Toshiba
Ny fivoaran'ny dokam-barotra